Learning Media ~ Htet Aung Kyaw
5:38 AM Htet Aung Kyaw
Rule of Third ဆိုတာ ဘာလဲ။
(Rule of third ဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့်ကတော့ ကိုယ်ပြချင်တဲ့ အဓိကနေရာ Subject ကို အလယ်တည့်တည့်မှာမထားဘဲ ဘယ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ညာဖက်ဖြစ်ဖြစ် ရွှေ့ပြီး ဓာတ်ပုံရဲ့ ၃-ပုံ ၂-ပုံနေရာမှာ ထားတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ တချို့ကတော့ ပုံတပုံကို ဇယားကွက် ၉-ပိုင်းခွဲပြီး နေရာရွေးလေ့ရှိပါတယ်။)
သတင်းစာပညာအခြေခံသင်တန်း - ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်မည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အခမဲ့သင်ကြားမည့် တစ်လကြာသင်တန်းတွင် သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း နားလည်စေရန်နှင့် သတင်းထောက်တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေခံပညာများ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ နယ်မှလာရောက်သူများအတွက် လမ်းစရိတ်၊ အစားအသောက်နှင့် နေထိုင်ရေး စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
“Role of New Media and Technology in Socioeconomic Development of Myanmar” ဟောပြောမည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း (MCPA) နှင့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP) တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက် (စနေနေ့) မွန်းလွဲ ၃း၀၀ နာရီ ၌ ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT Park, Conference Hall တွင် ဒေါက်တာအောင်ထွန်း သက်၊ ဥ
ီးသောင်းစုငြိမ်း၊ ဦးကျော်မင်းဆွေ၊ ဦးရတနာ တို့ က “Role of New Media and Ttechnology in Socioeconomic Development of Myanmar” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အ သင်းဝင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ MICT Park, ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်သည်။
by J-School Network on Sunday, September 9, 2012 at 3:50pm ·
၂ ပတ်ကြာသင်တန်း - ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ (၈)ရက် စတင်မည်။
မင်္ဂလာပါ။ အင်တာနျူးစ်မှ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
သင်တန်းသား (၁၀)ဦးသာ ရွေးချယ်ခေါ်ယူမည့် ရေဒီယိုသတင်းထောက်သင်တန်းကို အင်တာနျူးစ် ချင်းမိုင်သတင်းပညာသင်ကျောင်း (J-School) တွင် အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်မှ (၁၉)ရက်အတွင်း ခေါ်ယူကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းတွင် အဓိကသင်ကြားမည်မှာ မိမိတစ်ဦးထဲနှင့် ရေဒီယိုသတင်းများ ပေးပို့နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် နည်းပညာများ ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုအတွက် မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အသံဖမ်းစက်၊ လက်တော့ပ်ကွန်ပြူတာ ကိုင်တွယ်နည်းများ ပါဝင်မည်။ သမရိုးကျပုံနှိပ်သတင်းနှင့် ရေဒီယိုအကြား သတင်းရေးသားနည်း ကွာခြားပုံ၊ ရေဒီယိုအတွက် လိုအပ်သည့် အသံမျိုးစုံ ဖမ်းယူနည်း၊ အင်တာဗျူးလုပ်ပုံ၊ ရေဒီယိုသတင်းလွှာဖြစ်စေရန် တည်းဖြတ်ပေါင်းစပ်ပုံ၊ ဖုန်းနှင့် အီးမေးမှတဆင့် သတင်းပေးပို့နည်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားမည် ဖြစ်သည်။
ရေဒီယိုဆောင်းပါး (Feature)၊ သီးသန့်အစီအစဉ် (Programme) စသည့် ထုတ်လုပ် ဖန်တီးမှုများ သင်ကြားမည် မဟုတ်ပါ။ စတူဒီယိုတွင်းထုတ်လုပ် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အသံဖမ်း၊ တည်းဖြတ် ပေါင်းစပ်မှုများ ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ သတင်းနောက် ခြေရာခံကာ အပြင်ထွက် သတင်းလိုက်ယူမည့် သတင်းထောက်များ အတွက် အထူးသီးသန့်သင်ကြားမည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
1) ပုံနှိပ်သတင်း (အွန်လိုင်းသတင်း) ရေးသားမှု၊ သတင်းရယူမှု အတွေ့အကြုံ ရှိထားပြီး ရေဒီယိုသတင်းထောက် ဖြစ်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများ။
2) ပူပူနွေးနွေး ရေဒီယိုသတင်းထောက် ဖြစ်လာသူ အလွတ်သတင်းထောက်များ - ပြည်နယ်သတင်းရယူသူများ နှင့် အထူးသင့်တော်မည်။
3) သင်တန်းပြီးသည့်နောက် ရေဒီယိုသတင်းများ ရေးသားပေးပို့ရန် အစီအစဉ်ရှိထားသူများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ် ခေါ်ယူမည်။
သတင်းလုပ်သက် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်။
ကွန်ပြူတာတွင် မြန်မာစာ ရိုက်တတ်သူ။ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုတတ်သူ။
မြန်မာစာ ကျွမ်းကျင်ရမည်။ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းပါက ပိုကောင်းမည်။
(၂)ပတ်ကြာ သင်တန်းကာလ ထောက်ပံ့ကြေး ထိုင်းဘတ်ငွေ (၃၀၀၀) ချီးမြှင့်မည်။
ခရီးစရိတ်၊ နေထိုင် စားသောက်မှုများ ၀န်ဆောင်မှုပေးမည်။
သင်တန်းပြီးသည့်နောက် ဂရန့်အစီအစဉ်တွင် မိမိသတင်းလိုက်ယူလိုသည့် အစီအစဉ်များကို လျှောက်ထား နိုင်မည်။
မိမိအလိုရှိပါက သင်တန်းပြီးသည့်နောက် သင်တန်းဆရာများ ထံမှ အကြံပေး သင်ကြား ကူညီမှု ရယူနိုင်မည်။
လျှောက်လွှာဖောင်ပိတ်ရက်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာဖောင်ကို info@jschoolnewslab.com သို့ပို့ပေးပါရန်။
ဖောင်လိုအပ်ပါက အထက်ပါမေးလ်လိပ်စာကို ဆက်သွယ်ပါ။
(ဒါ့အပြင် လုပ်သက်ရင့် ရေဒီယိုသတင်းထောက်တဦး တနှစ်စာ အလိုရှိကြောင်းလဲ အင်တာနယူးမှ ဖိတ်ခေါ်ထားတာတွေ့ရပါသည်)
ရေဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးမှူး အလိုရှိသည်။
အတွေ့အကြုံရှိသော ရေဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးမှူး တစ်ဦး အလိုရှိပါသည်။
နေရာ - ရန်ကုန် ။
ကာလ - တစ်နှစ် ။
လစာ - သင့်တော်သူအတွက် ထိုက်တန်စွာပေးမည်။
ရေဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးမှူးသည် ဒေသခံရေဒီယို သတင်းထောက်များ နှင့် အစီအစဉ်ဖန်တီးသူများ လာရောက် အသုံးပြုမည့် စတူဒီယိုတစ်ခု၏ လုပ်ငန်း စတင်ရေး၊ ပုံမှန်လည်ပတ်ရေးအတွက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သတင်းပို့ရေး၊ အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရေးများတွင်လည်း အကူအညီ ပေးရမည်။
ထို့အပြင် ဒေသတွင်းရှိ ရေဒီယိုဌာနများ နှင့်လည်း ၎င်းတို့၏ သတင်းနှင့် အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ဗျူဟာများကို သွားရောက်ဆွေးနွေးရမည်။ ၎င်းတို့၏ သတင်းထောက်များ အစီအစဉ်မှူးများကို လိုအပ်သလို ကူညီသင်ကြား ပြသရမည်။
အသေးစားဘတ်ဂျက် စီမံကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လစဉ် ပရောဂျက်ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမည်။
· ရေဒီယိုသတင်းပို့ခြင်း အစီအစဉ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ကြာ အတွေ့အကြုံ။
· ဌာနပြင်ပရှိ သတင်းထောက်များကို ကူညီပေးသည့် အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
· သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိပါက ပိုကောင်းသည်။
· ဆော့ဖ်ဝဲများ - Adobe Audition and/or Audacity editing software သုံးတတ်သူ။
· ရင့်ကျက်ပြီး တာဝန်ယူတတ်သူ။
· မြန်မာစကား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူ။
· ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသား။
ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် (CV)၊ မိမိနှင့်သင့်တော်ကြောင်း ရှင်းပြသည့်စာ (Cover Letter) နှင့် မျှော်မှန်းသည့်လစာ များကို info@jschoolnewslab.com သို့ပေးပို့ပါရန်။
တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်သတင်းများရေးသားခြင်း (ကချင်ပြည်နယ်အထူးပြု သင်တန်း)
(၄)ပတ်ကြာမည်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့ သင်တန်း စမည်။
မင်္ဂလာပါ .. Internews မှ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်သတင်းများရေးသားခြင်း သင်တန်းများကို လာမည့် (၆)လအတွင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ရာ ယခုပထမဆုံး အနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ကို အထူးပြုလေ့လာမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လေးနက်သိမ်မွေ့သော အကြောင်းအရာများကို သတင်းထောက်များ ပိုမို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်လာစေရန်နှင့် ယင်းကိစ္စရပ်များကို သတင်းရေးသားရာတွင် လိုအပ်သည့် အဆက်အသွယ်များ အခြားရင်းမြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မိစေရန် ရည်ရွယ်သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ရှိ သတင်းပညာသင်တန်းကျောင်း (J-School) ၌ကျင်းပမည့် သင်တန်းတွင် ပြည်နယ်သတင်းများကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ မျှမျှတတ ထဲထဲဝင်ဝင် ရေးသားနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အရေးပါသော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာသင်ကြားမည် ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများက သင်တန်းသားများကို အောက်ပါ အကြောင်းအရာများ လမ်းညွှန် ဟောပြော ပို့ချမည်ဖြစ်သည်။
· ပြည်နယ်များအကြောင်း အခြေခံအချက်အလက်များ
· သမိုင်းကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံများ
· ကချင်ပြည်နယ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအကြောင်း
· ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများအပေါ် တိုင်းရင်းသားများထံမှ ရှုမြင်ချက်
· ပြည်နယ်များရှိ သဘာဝရင်းမြစ်၊ မြေယာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ
· ပဋိပက္ခနှင့် လူမှုဘေးဆိုးများအကြောင်း သတင်းရေးသားပုံ
စံချိန်မီ လက်တွေ့ သတင်းရေးသားမည့် သတင်းခန်းသင်တန်း
သတင်းရေးသားရာတွင် အစဉ်လက်ကိုင်ထားရမည့် “သတင်းရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ”ကို ပိုမိုကျွမ်းကျင်စွာ ကျင့်သုံးစေနိုင်ရန်လည်း အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာများက လက်တွေ့သင်ကြားမည်။ သတင်းများကို စုပေါင်း သုံးသပ်လေ့လာမည်။ တကယ့်သတင်းခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ကာ ကချင်သတင်းများ ပြည်နယ်သတင်းများကို ရေးသားပေးပို့ကြရမည်။
သင်တန်းကာလအတွင်း ပါဝင်တက်ရောက်သူများ မိမိတို့ပေးပို့လျက်ရှိသည့် သတင်းဌာနများအတွက် သတင်းများ ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်စေရန် အားပေးကူညီသွားမည်။ အလွတ်သတင်းထောက်များ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့နှစ်သက်ရာ သတင်းဌာနများထံ သတင်းများ ပေးပို့ရောင်းချနိုင်သည်။
· အလယ်အလတ်အဆင့်မှ အကြီးတန်းအဆင့် သတင်းထောက်/အယ်ဒီတာများ - ပြည်နယ်သတင်းများ ရေးသားရန် စိတ်ဝင်စားသူ၊ အမှန်တကယ်လည်း ရေးသားမည့်သူ ဖြစ်ရမည်။
· တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် နေထိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် သတင်းထောက်များ (သို့မဟုတ်) တိုင်းရင်းသား သတင်းထောက်များလည်းပါဝင်စေရန် ရွေးချယ်ခေါ်ယူမည်။
· ပုံနှိပ်၊ အင်တာနက် နှင့် ရေဒီယိုသတင်းထောက်များ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
· ရုပ်သံသတင်းထောက်များ လျှောက်ထားပါက ရုပ်သံတည်းဖြတ် ထုတ်လုပ်မှု တတ်မြောက်ပြီးသူများ ဖြစ်ရမည်၊ ထိုပညာရပ်များကို ယခုသင်တန်းတွင် သင်ကြားမည်မဟုတ်ပါ။
· အနည်းဆုံး (၆)လ သတင်းလုပ်သက်ရှိရမည်။
· ကွန်ပြူတာအသုံးပြုနိုင်ပြီး မြန်မာစာရိုက်နှိပ်တတ်ရမည်။
· မြန်မာစာဖြင့် သတင်းရေးသားနိုင်ရမည်။
အခြားသော အကျိုးကျေးဇူး ခံစားခွင့်များ
· (၄)ပတ် သင်တန်းကာလအတွက် ထိုင်းဘတ်ငွေ (၆၀၀၀) ချီးမြှင့်မည်။
· သင်တန်းတက်ရန်လာသည့် ဗီဇာနှင့် ခရီးစရိတ်များ တာဝန်ယူပေးသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရရှိရန်မှာ မိမိတာဝန်သာ ဖြစ်သည်။
· သင်တန်းကာလ နေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေး တာဝန်ယူပေးသည်။
· သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်နောက် Internews ၏ ထောက်ပံ့ကြေးငွေ (ဂရန့်)အစီအစဉ် အတွက် လျှောက်ထားနိုင်မည်၊ မိမိအစီအစဉ်များ တိုင်ပင် တင်ပြနိုင်မည်။
· သင်တမ်းပြီးဆုံးသည့်နောက် ကာလတစ်ခုအထိ သင်တန်းဆရာများထံမှ အကြံပြုချက်နှင့် အားပေးကူညီမှုများ ဆက်လက် ရယူနိုင်မည်။
မြန်မာ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ယက်မှ သတင်းစာသင်တန်းဖွင့်မည်။
MJN မှ အခြေခံ သတင်းစာပညာ ၂ ပတ်တာ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်။
သတင်းစာ ပညာ သင်တန်း မတက်ရောက်ဖူးသေးသည့် သတင်းထောက်သစ်များကိုရည်ရွယ်၍
အခြေခံ သတင်းစာပညာ သင်တန်းကို မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှ
၁၄ ရက်ထိ ၁၀ ရက်ကြာ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းဂျာနယ်များ၊ အွန်လိုင်း မီဒီယာများ၊ အသံလွှင့်သတင်းဋ္ဌာနများတွင်
အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် သတင်းထောက်များ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်တန်း ဆရာများအဖြစ် ဦးရဲနိုင်မိုး၊ ဦးမြင့်ကျော်နှင့် အခြားသော
အတွေ့အကြုံရှိသည့် ဧည့် ဟောပြောပို့ချသူများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းချိန်မှာ တနင်္လာမှ သောကြာ နံနက်ပိုင်း တပိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းနေရာ၊ မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်၊ အမှတ် ၁၈၂ ၃၆ လမ်း အလယ်ဘလောက်၊
Email - mjn.online.net@gmail.com
Facebook Mail -
09-730 57174 - Eaint Khine Oo
09- 5072 895 - Tin Zar Zaw
09-4312 1058 - Thurain Hlaing
09- 43123 626 - Kyaw Zayar Tun/Myat Su Mon
09- 73019392 - Htet Khaung Linn
09-7313 7245 - Aung Thura
09-7390 3277 - Oakkar Ko Ko
09-4200 69737 - Min Htet San
09- 730 67803 - Thu Ra Myo
သတင်းထောက်ပေါက်စ။ ကင်မရာမင်းပေါက်စများအတွက် ၂၀၀၆-ခုနှစ်က ကိုဘမောင်ဇင် ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နည်းအခြေခံ စာစောင်လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Camera Shooting Guide
သတင်းဂျာနယ်များပိတ်ပင်မှုနှင့် မတရားတဲ့ မီဒီယာဥပဒေဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း
သော မည်သည့်ရေးသားမှုကို အစိုးရက
ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲမှုများကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန်။
မီဒီယာသမားများအား နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က
အထက်ပါတောင်းဆိုချက်များကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးရန် ယနေ့တက်ရောက်လာသော
သတင်းမီဒီယာသမား ၉၂ ဦးက သဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
သာလွန်ဇောင်းထက်၊ ကိုသူရအောင်၊ ကိုဝေဖြိုး၊ ကိုနိုင်မင်းဝေ၊ မနန်းလွင်၊
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရေးနှင့် စည်းရုံးရေးကော်မတီသည် ကော်မတီဝင်အားလုံးပါဝင်ပါသည်။
Myanmar's exiled media lured back home by reform
By Agence France-Presse, Updated: 2/26/2012
"We only ask for fair and balanced reporting," he said.
By SAW YAN NAING / THE IRRAWADDY Thursday, February 16, 2012
Under the rule of former dictator Snr-Gen Than Shwe, Burma was one of the most media-unfriendly countries in the world. The press was denied access to everything from public debates to Parliamentary sessions, media websites were blocked and hacked, stories were censored in Orwellian fashion, and journalists were forced to stay as low-profile as possible, writing under pseudonyms, and often living in fear of arrest.
But things have changed under President Thein Sein's administration. Government officials have begun speaking to the media, political news can be published in local journals, foreign journalists are being granted visas into the country, and various new regulations and laws on censorship and media are currently being discussed.
On Jan. 20, Thein Sein gave his first interview as president to foreign media when he spoke to The Washington Post.
Thein Sein, who never gave interviews to foreign media under the Than Shwe regime, told The Washington Post: “With regards to freedom of the media, you can see that it is not like it was before.
“The media needs to take responsibility ... Media freedom will be based on the accountability they have,” he was reported as saying.
One immediately noticeable difference in government censorship that is apparent to everyday Burmese is the appearance of opposition leader Aung San Suu Kyi's picture on the front pages of journals at news stands in the streets.
British writer Benedict Rogers, the author of “Than Shwe: Unmasking Burma’s Tyrant” recently returned from Burma. He said he bought local newspapers that had pages filled with news and images of Suu Kyi. Rogers was deported from Burma in 2011 due to the contents of his book.
“This year, I had no problem with gettingavisa,” he said. “Nobody said anything to me when I was walked through [Customs and Immigration] and nobody followed me,” he said. “My visit was smooth. It was very surprising.”
Under the military junta, foreign journalists and writers frequently sneaked into Burma posing as tourists. Those caught working were invariably deported and stamped persona non grata.
But since the new government took office in March 2011, foreign journalists and exiled Burmese journalists from BBC Burmese Service, VOA Burmese Service and Radio Free Asia have been granted media visas,amove observers say was an early indication of Naypyidaw's policy of reform. News groups such as BBC, VOA and Al Jazeera are all reporting live now from Rangoon and Naypyidaw.
May Thingyan Hein, the chief editor of Shwe Myit Makha, an online news agency based in Rangoon, said, “We feel more confident. We feel we have more responsibility.”
She said that in the past almost every Rangoon-based journalist usedapseudonym when reporting or requested anonymity when speaking to foreign or exile media.
More and more publishers and journalists are now applying for licenses to open new publications. A few individuals or small groups such as Shwe Myit Makha and Yangon Press International have established their own online media outlets and update the latest news briefs through Facebook.
May Thingyan Hein said, however, that the policy of opening space for Burmese dissidents and exiled journalists who are critical of the Burmese government is in fact regarded in Naypyidaw asamajor concession.
“Press freedom doesn’t totally exist, but I think it exists on some level,” she said.
Rogers, on the other hand, said that he felt the teashop atmosphere in Rangoon was much more open and less guarded than in previous times. “People are now quite open and will talk frankly [about politics] in the teashops in central Rangoon,” he said.
“Almost everybody I talked to said they believe the changes are genuine. I think this is the beginning of the process of openness,” he said.
In early February,amedia workshop held in Rangoon was attended by media figures from around Southeast Asia and exiled Burmese journalists from BBC Burmese Service, VOA Burmese Service and Mizzima News Agency.
In the past, the state-run media in Burma ran prominent propaganda slogans slating those news groups for sowing discord and creating disunity among the population.
At the workshop, attendees debated an end to censorship in Burma and the enforcement ofadraft media law.
Tint Swe, the director of Burma’s notorious Press Scrutiny and Registration Board, attended the forum and personally presented the newly drafted media law. He reportedly told those at the workshop that there would be no more censorship in Burma after the media law is enacted.
Aung Zaw, the editor of The Irrawaddy, recently visited Burma after 23 years in exile.
He said that the degree of press freedom is greater than before, but that the censorship board will still reject any articles that touch upon selectively sensitive issues—such as corruption, federalism, ethnic issues, military affairs and cronyism.
However, Burma’s press freedom should not be compared to neighboring countries such as Vietnam and Cambodia, he said, as those states have authoritarian governments. “It should instead be measured by universal standards of press freedom,” he said.
But although Rangoon-based journals still have to pass through the process of censorship, the government announced in June 2011 that publications and articles focusing on sports, technology, entertainment, health and children’s issues on longer had to be submitted for censorship.
A new media law titled “Printing Press and Publication Law,” which involves 10 chapters dealing with “rights, duties, and ethical codes for writers and journalists, and penalties” will be submitted to the Attorney General’s Office for comments, before going to the Cabinet and to Parliament for approval.
Although there are no official statistics concerning Facebook users, the social network is hugely popular with thousands of users and is very often the key source of information-sharing among people in Burma and in spreading news to the international community.
On the radio—for so long the rural person's only conduit with the outside world—Burma’s state-run channels have now agreed to air some of Washington-based VOA’s programs, albeit selectively.
After his trip to Burma in late 2011, Than Lwin Tun, the head of the VOA Burmese Service, said that Information Minister Kyaw Hsan had agreed to selectively broadcast some of his organization's products, such as international news, English education, health, science and technology programs.
Despite the practical concessions, however, several voices in the media remain skeptical.
A freelance journalist who works for foreign media organizations said, “It looks like the whole process is to please the West in order to get sanctions lifted. I really don't know how genuine they [new government] are.”
Maung Wun Tha, the editor of Pyithu Khit,aRangoon-based journal, said that sensitive issues such as the conflict with ethnic rebels were still taboo.
Reporting on the ongoing armed conflict in Kachin State was also off limits, he said.
Several observers say they see the stumbling block as Information Minister Kyaw Hsan—known to beahardliner and an advocate ofastrict censorship policy—who remainsakey figure at the Ministry of Home Affairs.
Nonetheless, nine Burmese journalists including Zaw Thet Htwe and blogger Nay Phone Latt were freed inagovernment amnesty in January.
“I will keep writing even if it means I get arrested again,” said Nay Phone Latt. “Then we will know whether or not we have real [press] freedom.”
ရန်ကုန်က မီဒီယာ ဆွေးနွေးပွဲ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေတက်ရောက်
အတွင်း မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု" လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတခုကို ဇန်န၀ါရီ ၃၀-ရက် ဒီနေ့မနက် ၉-နာရီက ရန်ကုန် အင်းလျားကန် ဟိုတယ်မှာ ကျင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တွေ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတွေ။ စာပေစိစစ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတွေ။ နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေ။ ပြည်တွင်းမှ ပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများလဲ တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ အဲဒီပုဂိုလ်က ဆက် ပြောပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲ ပထမပိုင်းမှာ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ ထိုင်းမှ ပညာရှင်တွေက စာတန်းဖတ်ကြားတင်ပြကြပြီးနေ
ာက် စာပေစိစစ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင့်ဆွေကလည်း "Current Policy on Drafting Media Law" အမည်ရှိ စာတန်းကိုဖတ်ကြား တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အခု မူကြမ်းရေးဆွဲထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မီဒီယာ ဥပဒေအကြောင်း သူက ထည့်သွင်းပြောကြားသွားပီး မီဒီယာဥပဒေကြမ်းကို နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့တင်ပြထားကြေ
ာင်း၊ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ဆက်လက်တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးတင့်ဆွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အခန်း(၄) စာပေလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ကျင့်ဝတ်များအကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအတ
မီဒီယာ စီမီနာမှာ ဦးတင်ဆွေ တင်ပြတဲ့ စာတန်း...
ကျနော် ဘလော့ဆီ ၀င်ဖတ်တဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးရှိ လူငယ် ၂-ဦးကနေ ခင်ဗျားက ၀ါရင့် သတင်းထောက် လုပ်ပီး သတင်းစာပညာအကြောင်း ပညာပေးကိစ္စမပြောဘဲ့ တောထဲက အကြောင်းတွေချည်းပြောနေတယ် လို့မှတ်ချက်ပေးလာပါတယ်။
ကျနော်ဆီက သူတို့စိတ်ဝင်စားတာက သတင်းစာပညာလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကလဲ သတင်းစာပညာကို စာတစောင် ပေတဖွဲ့ရေးထားတာမရှိသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့် BBC က လင့်တွေကိုလဲ့ လောလောဆယ်တင်ပေးထားပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံနဲ့ အမြင်တွေကို မကြာခင်ရေးပြနိုင်ဖို့ ကျိုးစားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း...။
၁- ဘီဘီစီ- မြန်မာပိုင်း သတင်းပညာကောလိပ်မှ...
သတင်းထောက်တွေ သတင်းရေးနည်း ၁-
၃- သတင်းရေးနည်း ၃
၄- မျှမျှတတ သဘောထားအမြင်...
၅- စာကို နားနဲ့ဖတ်ပါ...
၆- စာကိုနားနဲ့ဖတ်ပါ ၂-
၈- အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်က နိုင်ငံခြားစကားအသုံးအနှုံး